Hetsipanoherana Manohitra ny Kolikoly Ao Romania Sy Ny Vesatry ny Henatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2017 17:53 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, Български, русский, English
Hetsipanoherana manohitra ny kolikoly – Bucharest 2017 – Piata Victoriei. SARY: Mihai Petre (CC BY-SA 4.0) tao amin'ny Wikimedia Commons.
Tamin'i Ana-Maria Dima
“Isika no toy izao dia noho ny fandàvana hatramin'ny farany sy hatrany ifotony ny nanaovan'ny hafa antsika.”
– Jean Paul Sartre, tao anatin'ny teny fanolorana natao ho an'ny Ireo Mahantran'izao Tontolo Izao, nosoratan'i Frantz Fanon
Ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana, toa ny kolikoly no tena tondroina ho marika amantarana an'i Romania. Ara-tantara, ilay firenena, ary indrindra fa ny faritra midadasika ao mihitsy, dia nitolona nanohitra ireo fomba fanao lalim-pàka, mazàna tsy araka ny lalàna na mila hihoatra ny vàla, notefena hisy fiantraikany eo amin'ny vokatry ny politika sy toekarena na hahazoana tombontsoa sy tombondahiny. Tao anatin'ireo taona 10 hatramin'ny nidiran'i Romania ho ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana, raha ny marina, misy teny vitsivitsy ampifandraisina hatrany sy averimberina matetika miaraka amin'ny zavabitan'i Romania sy ny kilasy politika. Toy io ihany no nitranga talohan'ny nidirany tao, rehefa napetraky ny Kaomisiona Eoropeana mba handinika ny momba an'i Bolgaria sy Romania ny Rafitra Manokana ho Fiarahamiasa sy Fanamarinana. Ity fepetra ity momba ny fidirana ho ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana, izay tsy mbola nisy toa azy tany aloha tany, dia natao hampihenàna ny tahan'ny kolikoly manerana ny sehatra rehetra, miainga avy amin'ny rafi-pitsaràna ka hatrany amin'ny sehatra faratampon'ny politika, saingy napetraka ihany koa izy io ho fitaovana “hiatrehana ny kolikoly any amin'ireo vava-ady rehetra misy” araka ny nasongadin'ireo tatitra momba ny fandrosoan'ny rafitra.
Na iza na iza miaina, mianatra na manao fandraharahàna ao Romania—toerana iray izay lazaina fa tena anjakan'ny kolikoly any amin'ny kilasy politika sy ny sehatra rehetra amin'ny fitantanana, tafiditra amin'izany ny mpanampy ny mpitsabo, ny mpitsabo, ny mpampianatra ary ny polisy—dia hahita fa sarotra ny tsy hanana toetsaina anjakan'ny kolikoly, izay toy ny hita ho azy eny rehetra eny. Ny filàna fanovàna “ara-drafitra”, araka ny nomarihan'ny tatitry ny Fiombonambe Eoropeana tany ambony tany, dia olana iray ho an'i Romania efa ho ampolo taona maro izao. Saingy ny taham-pisian'ilay fisainana hoe fiarahamonina efa iraiketan'ny kolikoly lalina dia mametraka fanontaniana vitsivitsy manahirana: isika ve, amin'ny maha-olompirenena, voatery ho mpanao kolikoly noho ny fifandraisana amin'ny “rafitra” manodidina antsika? Afaka miala amin'ny kolikoly ve ny olona iray raha toa ka “voahodidin”izy io?
Enina volana latsaka izao no voafidy ny governemanta ao Romania amin'izao fotoana izao. Ny fipoahan'ireo hetsipanoherana an'arabe tamin'ny Febroary hanoherana ny fanapahankevitry ny governemanta hametraka ny didim-panjakana momba maha-latsaka an-katerena dia noheverina ho toy ny hetsika manoloana ny kolikoly. Ilay didim-panjakana, ankoatra ireo fepetra hafa, dia manaisotra ireo karazana fitondrantena tsy mety vitan'ireo manampahefana sasantsasany ho tsy heloka ary, farafaharatsiny eo imason'ny olona, hanalefaka ny lalàna efa misy hanoherana ny fahalòvana. Saingy ireny hetsipanoherana ireny, ny goavana indrindra hatramin'ny nirodanan'ny fitondrana Kaominista tamin'ny 1989, dia namela fanontaniana marobe, indrindra fa ao anaty firenena iray izay “miatrika ny kolikoly amin'ny lafiny rehetra”, efa ho ampolo taona mahery teo ambanin'ny fitondran'ireo governemanta natsangan'ny Antoko Nasionaly Liberaly, ny Demaokraty Sosialy, ny Fiarahamientana Demaokratikan'ireo Hongroà ao Romania, ny Demaokraty Liberaly, sy ny hafa.
Miseho amin'ny endrika maro isankarazany ny kolikoly, toy ny fandosirana hetra, ny fanampàrana fahefana, ny tsolotra, ny fampifangaroana tombontsoa, ny fanadiovana vola maloto. Afeniny ny fahantrana sy ny tsy fandehanan-draharaha, no sady miaraka ihany—ary amin'ny fomba maneso—mitondra azy ireny hiseho masoandro. Nefa koa tonga miaraka aminà hevitra firaisana tsikombakomba mandeha ho azy, hita eny rehetra eny, indrindra fa amin'ny tranganà olompirenena izay mety tsy ampy fahaizana sy fahafantarana fomba hafa afaka ifandraisana amin'ireo manampahefam-panjakana. Araka izany dia endriky ny firaviraviana tànana aterany ihany koa izy io. Na iza na iza efa niaina tao Romania dia azo heverina ho efa voapentina vokatr'io avokoa, satria tsy maintsy mahafono ny vahoaka rehetra ao aminy ny endrika kolikoly miely patrana ao amin'ny firenena iray, tsy miankina amin'izay fatran'ny fanirianao hilaza ny tenanao ho tsy manantsiny.
Ary dia mamàka lalina ao anatin'ny fisainantsika ny fitantaràna momba ny kolikoly, raha tsy hoe ao anatin'ny fomba fanaontsika mihitsy aza. Ireo mpikambana avy amin'ny kilasy antonony nahita fahalalàna ao Romania, izay nidina an'arabe tamin'ny Febroary, dia toy ny nitambesaran'ny fihetsehampo hafahafa nateraky ny henatra, ilay karazana henatra mahazatra iainana any amin'ireo firenena izay ny olompirenena dia tena miraikitra amin'ny fieritreretana toerana tena hafa mihitsy amin'ny misy azy, ary miafara amin'ny fanaovany tsinontsinona ny tenan'izy ireo, ka ny tsirairay samy tavela anaty dingan'ny fanofinofisana tsy miova. Henatra io ho an'ireo Romaniana mila ravinahitra mandeha nìmiasa any amin'ny Fiombonambe Eoropeana izay mety ho araraotina rehefa any amin'ireo firenena mampiantrano azy ireo, saingy noho ny karama “tsara kokoa”, raha tsy hoe “ara-drariny kokoa”. Ary amin'ny tranga rehetra, iza no hilaza fa tsy maintsy ratsy kokoa noho ny fanararaotana atao anao ao anatin'ny firenenao ny fanararaotana manjo anao any ivelany ? Ary eo anelanelan'ireo roa ireo, moa ve manana safidy ireo mpiasa izay miankina amin'ireo mpampiasa azy ny fahavelomany?
Misy ny tsolotra efa lasa vononina fotsiny amin'izao mba homena ireo mpanampy ny mpitsabo any amin'ny hopitaly ho tambin'ny fikarakaràna feno fanajàna; ny fiandrasana fa hisy zavatra amboniny hotakian'ireo izay te-hanao ny asany araka ny tokony ho izy sy ampahamarinana miaraka amin'ny fanjakana na amin'ny fotoana andraisana tolotra fototra sasantsasany; ilay “hetsika fijerena kely (saino hoe : mametraha kely!),” araka ny fiantson'ireo Romaniana azy, ilaina mba hanafainganana raharaha, na hanamoràna ny famoahana zavatra iray toy ny fanomezana fahazoandàlana mitondra fiara ho an'ny olona iray afaka fanadinana. Saingy ny kolikoly dia efa lasa lavitra mihoatra ny fikarakaràna sy ny faniriana hanindry ireo hetsika ataon'ny manampahefam-panjakana: lasa fihetsika tsy baikoana sy fandrefesana ilay izy—raha tsy izy irery mihitsy aza no fandrefesana—manohitra ireo izay efa fandrefesana ny ankamaroan'ny zavatra rehetra. Ary ao anatin'ilay dingana dia lasa mino isika hoe ny fiarahamonintsika dia tena tsy mandeha amin'ny falehany raha mitaha amin'ireo ambiny sisa rehetra ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana, finoana iray izay mandoaka tsikelikely ny fahatokisantenantsika.
Nampipongatra indray ny henatra efa mamàka lalina ao amin'ny fomba fahitantsika ny tenantsika, amin'ilay lamaody miparitaka be hoe “mivoaka an-dàlambe ary mikiakiaka mandany fofonaina” na “aza mitorevaka eo fotsiny, ndeha manao zavatra “. Tena mafy tokoa ny donan'ireo tondron'ny kolikoly sy ny fahantrana tamin'ny fahatsapantena mifamahofaho ho ambany be ananantsika mianakavy. Fantatsika ny laharana ambony tazonin'ny kolikoly sy ny fahambanian'ny fari-piainana. Ambony ny laharantsika amin'ny taham-pahantran'ny ankizy, ny ambony indrindra amin'ny fifindramonina ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana. Fanaovana varoboba ny orinasam-panjakana ho lasan'ny tsy miankina, ny famarotana ireo tany midadasika mamokatra ananan'ny firenena tao anatin'ny folo taona farany lasa teo ( amin'izao fotoana izao dia ny antsasaky ny tany mamokatra ao Romania no eo am-pelatànan'ireo tsy Romaniana), ny fifindràmonina faobe sy ny taha avoben'ny fahantrana no zara fa vokatra nentin'ireo fepotoam-piasàna nahombin'ny fitondràna. Fantatsika koa, fa isika dia “loharanonà herim-pamokarana moravidy” ho an'i Eoropa. Io fahatsapàna maharitra ny tena ho tsy alehany sy tsy sahaza io, io fitsiriritana ny Hafa io, ny fipetrahana amin'ireo toerana mandàla ny rariny sy “tsy misy kolikoly”, ireny fambara ireny, izay lavitry ny tany niaviana vao mba hita, no nanenika ny fisainana iombonantsika rehetra.
Nefa ao anatin'ity tranga ity dia teraka ny fanontaniana hafa : raha tena latsa-paka amintsika tokoa ny kolikoly, inona no hataontsika hiatrehana ny zavatra rehetra? Hifampiampanga isika samy isika ve? Mety hoe tsy ny governemanta irery ihany ve no mpanao kolikoly, fa izy no hany tena itsingolongolohana? Ahoana no niatrehan'ireo orinasa goavana ny kolikoly rehefa tafiditra tamin'ny tsena Romaniana, ary etsy ankilany, hatraiza no maha-mpanao kolikoly azy ireny? Iza no mpanao kolikoly bebe kokoa, ny governemanta sa ny sehatry ny fandraharahàna? Afaka ialàntsika ve ny tsingerin'ny kolikoly amin'ny alàlan'ireo fomba tsy ilàna ny fanamarinana ara-politika—arakarak'izay mampety ny raharaha—saingy mitoetra ho marina hatrany? Ary raha ny rafitra iray mihitsy no efa rakotry ny kolikoly tanteraka, hosoloina fotsiny amin'ireo hafa izay manana ratsitoavina (Fanamarihana: teny heverin'ny mpandika fa tsara toerana hifanohitra amin'ny hoe ‘soatoavina’) tahaka azy ihany ve ireo endrika tranainy efa mpanao kolikoly? Ny ady atao amin'ny kolikoly dia misy loza mitatao mitondra mankamin'ny “maso solon'ny maso” raha ny fanontanianaa tahaka ireo no mitàna ny lohalaharana ao anaty lahadinika.
Kanefa, ny hoe hita sy nomena fiheverana ambony noho ny nanaovana hetsika manohitra ny kolikoly, na dia andro vitsy monja aza, dia mampiakatra ny fihetsehampo feno rehareha sy firaisantsaina ao Romania. Ny fahatsapana toepo maneho fiarahana, izay mety tsy ho mora pentin'ny henatra, raha tsy ireo fomba fanao izay miseho isanandro vaky any amin'ny hopitaly, angamba any an-tsekoly koa, na any amin'ny lapan'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina eo an-terana, toerana izay ireo mpitarika politika sy ara-pitantanana dia mbola mitondra ny tenan'izy ireo ho toy ny fanomezana natolotr'Andramanitra ho an'izao tontolo izao.
Tsy miseho fotsiny intsony amin'ny tsy fahafahampo miaraka amin'ny tsy fahafahantsika “miara-mientana” io fahatsiarovantena io. Ireo fomba fiteny toy ny hoe “vreau o țară ca afară”—ara-bakiteny, “maniry firenena iray toy ireo hita any ivelany”—dia toy ny manao ny tontolo tandrefana ho idealy ary fakàna sary an-tsaina ny hoe aiza ilay fahatsapana maharitra ny tenantsika ho tsy alehany sy tsy sahaza io no tsy hanelohelo intsony antsika. Toerana iray nanainga fanahy ho an'ny maro i Romania nandritry ny andro maromaro, toerana niriariavan'ny olona am-pilaminana teny an'arabe, tamim-pireharehana, mba hitakiana ny tsy hamelàna fotsiny ny kolikoly ho afa-maina tsy mizaka sazy, sy koa mba hanekena fa mbola misy ny vesatra manindry tsy mitsahatra ateraky ny kolikoly, mihoatra lavitra noho ireo endrika politika hita vatana maneho azy.
Fantatsika tsara izany rehetra izany, saingy hatreto anefa dia tsy misy na iza na iza amintsika afaka hanaisotra ny henatra aterany, henatra iray izay noterena hipetaka amintsika avy amin'ny lafy maro, na angamba henatra iray raisintsika ho mora loatra ny miaina miaraka aminy.
Ana Maria Dima dia Romaniana miasa amin'ny sehatry nyfampandrosoana iraisampirenena. Araho ao amin'ny Twitter izy, amin'ny @AnaMariaDima.
Makedonia 1 herinandro izay
Valanjavaboary nasiônaly vaovao ao Makedônia Avaratra, iharan-doza noho ireo tetikasam-pampandrosoana mitohy
Makedonia 2 herinandro izay
Azia Afovoany sy Kaokazy 05 Jona 2022